Governemanta Mapar : Voasambotra izay maneho hevitra -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta Mapar : Voasambotra izay maneho hevitra
15/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Izany ve no olon’ny rantsan’ny firenena mikambana, tsy mandala ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny. Amin’ny fotoanan’ny fifidianana tahaka izao dia malalaka ny fanehoan-kevitra, ary tsy tokony hosakanana na iza na iza. Ny zava-nisy anefa, olona mbola tsy niteny na inona na inona, vao saika haneho hevitra dia nosamborina. Izany hoe mbola tsy nisy ny fahotana mahafaty nataony “acte consommé”, raran’ny lalàna famaizana sy ny lalàna velona eto Madagasikara dia efa mihatra ny fisamborana. Raha ny zava-nitranga omaly tetsy Antaninarenina, dia nosamborina ry Raindina sy ny olona efatra miaraka aminy, raha saika hiditra ny hotely iray saika hanaovany fanambarana. Efa tonga mialoha teny an-toerana anefa ny mpitandro filaminana, ary nanakana ireo olona izay saika hanatanteraka fanambarana. Niezaka niditra tao amin’ny efitrano anefa ireto izay saika hanatanteraka fanambarana, ka teo no nisambotra avy hatrany ireo mpitandro filaminana. Izany hoe tsy nisy vesatra tokony hisamborana ireo olona efatra ireo, fa dia famoretana no indro niseho.
Ambetin-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, fony izy tonga teo amin’ny toerany, dia ny filazany fa “tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no vahaolana”. Teto anefa dia hery no nampiasain’ny governemanta tamin’ny alalan’ny fampiasana ny mpitandro filaminana, ary fisamborana no natao. Tsiahivina fa isan’ny nitabataba ny tokony hametrahana ny fahalalahana hiteny ny mpiara- dia amin’ny praiminisitra Ntsay Christian, nefa dia izao nanolotsaina azy izao hisambotra ireo mpanao politika dimy ireo. Mazava rahateo ny voalazan’ny lalàm-panorenana fa tsy tokony hosakanana, ary malalaka ny rehetra amin’ny fanehoan-kevitra. Noho izany fanitsakitsahana lalàm-panorenana izao nataon’ny governemantan’ny Mapar izao, satria tsy nisy rahateo ny heloka vitany. Mikasika ireo olona voasambotra ireo kosa, dia fantatra fa ny hariva dia efa navoakan’ny mpitandro filaminana ry Raindina sy ny ekipany taorian’ny fanadihadiana natao.
Manao tohivakana ny fanampiana avy amin’ireo firenena vahiny. Tontosa omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE), tao amin’ny efitrano fifanarahana, ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana teo amin’ny Fanjakana malagasy tamin’ny alalan’ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka, ankilany, sy ny ...Tohiny